विमानभित्र महिलाले स्टन्ट गरेको भाइरल भिडियामा के छ ? | Safal Khabar
विमानभित्र महिलाले स्टन्ट गरेको भाइरल भिडियामा के छ ?
सोमबार, ०२ जेठ २०७९, १३ : ५७
न्युयोर्क । यात्राको आनन्द लिने उत्तम तरिका भनेको हल्का सामान बोक्नु हो । तर, केही व्यक्तिहरू आफ्ना कार्यमा दक्ष र असजिलो व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन्छन् । विमानमा बच्चासँगै यात्रा गरिरहेकी महिलाको भिडियो यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।
अहिले भाइरल भिडियोमा महिलाले आफ्नो खुट्टाले विमानको ओभरहेड क्याबिन बन्द गरेको देखाइएको छ । यसले महिला विमानबाट उत्रिन लागेको देखिन्छिन् । बच्चालाई एक हातमा समातेर अर्को हातमा विमानको क्याबिनबाट सामान निकाल्छिन् ।
विमानका यात्रु र अन्य कर्मचारीले उनलाई सहयोग नगरेकाले महिला निरीह भएको तपाईले सोचिरहँदा त्यहाँ अकल्पनीय दृश्य देख्न सकिन्छ । ओभरहेड क्याबिनको ढोका बन्द गर्न जिमन्यास्टिक खेलाडीले झैँ उनले दाहिने खुट्टा उठाउँछिन् ।
उनको छोटो तर रमाइलो स्टन्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । लाखौँले सो भिडियो हेरेका छन् भने भिडियोमा ६ हजार ८६१ जनाले लाइक गरेका छन् । ‘ त्यो प्रभावशाली छ’, एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् । -एजेन्सी